कंगना रनावतलाई अर्को झ’ड्का: लाग्यो यस्तो आ’रोप – Articles Nepal
कंगना रनावतलाई अर्को झ’ड्का: लाग्यो यस्तो आ’रोप
एजेन्सी : चर्चा कमाउनकै लागि बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको पक्षमा बोलेको आ’रोप लागिरहेको अभिनेत्री कंगना रनावत माथि अर्को आ’रोप लागेको छ ।
बलिउड गायिका सोना महापात्राले कंगनामाथि स्वार्थी भएको भन्दै आ’रोप लगाएकी छिन् । महापात्राले ट्विट गर्दै कंगना आफ्नो बाहेक अरूको पक्षमा नउभ्भिने र नबोल्ने स्वार्थी भएको बताएकी छन् ।
Hahaha..the sister of the flag-bearer of the fight against what?Not nepotism for sure. My sisters don’t speak for me or troll for me,I have two.Also, Kangana might be impressing the mediocre with her messiah avatar, not me, surely not any basic intellect, forget intellectual. pic.twitter.com/RSyfLKY0Ch
योसँगै सोनाले बलिउडका केही नराम्रा प्रवृत्तिमा आवाज बुलन्द गरेकोमा कंगनालाई बहादुर भन्न सकिने बताएकी छन् । कंगना आफ्नोलागी बाहेक अरू कसैकालागी उभिएकी छैनन् । उनले आफ्नो सरहाना गर्ने मानिसलाई पनि कहिले याद गरेकी छैनन् । यो कुनै परिवर्तन चाहने वा कुनै पनि विचार बोक्ने नेताको लायक पनि होइन । हो, उद्योगमा जारी केही नराम्रा प्र’वृत्तिको विरूद्ध आवाज उठाउन उनी एकदमै बहादुर छिन् । सोनाले ट्विट गरेकी छन् ।
जब कसैले अनुष्का शर्मा र बाँकी मानिसका बारेमा पोस्ट सेयर गरेका थिए। म यही भन्छु की कंगना रनौत कृपया केही नारीवादी साथीहरू बनाउनुहोस् र केही राम्रा सल्लाहकार राख्नुहोस्, अगाडि ट्विटमा उनले लेखेकी छन् ।
यसैगरी सोनाले कंगनालाई पीडित महिलाका रूपमा पेस नहुन भन्दै व्यंग्य गरेकी छन् । कंगनाले सोनालाई ट्विटरमा ब्लक गरेकी छन्। यसको जानकारी पनि सोनाले ट्विटमा दिएकी छन् ।
मैले कहिले उनलाई फलो गरेको थिइन तर आज यसबारेमा मलाई थाहा भएको छ। कंगना हरकोहीको आ’लोचना गर्न चाहन्छिन् । तर के उनी दुनियाँ आपसी परस्परतामा काम गर्छ भनेर जान्दिनन्रु उनले यो यी सबै चीजको सामना कसरी गर्ने भनेर जान्नुपर्छ । ट्विटमा उनले भनेकी छन् ।
Previous Post: सुशान्त ड्र’ग्स प्र’करण:एनसीबीले दिपिका,श्रद्धा,सारा र रकुल प्रितको बैंक खाता अ’नुसन्धान गर्ने
Next Post: आइपिएल २०२०: सन्दिपलाई प्लेइंग ११ मा नराखेर प’राजित भएको हो त दिल्ली क्यापिटल्स ??